The Rohingya News Bank : Boat People
Members of Rapid Action Battalion rescued fifty-eight people off Teknaf coast in Cox's Bazar while they were being trafficked to Malaysia byatrawler through the Bay of Bengal.
Lt Col Khairul Islam Sarker, commander of Rab-15, confirmed the matter to our Cox's Bazar staff correspondent.
Rab also arrested two members of human trafficking gang and seized the trawler around 4:30am during their operation, he added.
Labels: 2022, Boat People, en, News, Rohingya. Malaysia
ရိုဟငျဂြာ တဈရာကြျော အငျဒိုနီးရှားကို စကျလှနေဲ့ရောကျလာ
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ အာခြေးပွညျနယျကို ရောကျရှိလာကွတဲ့ ရိုဟငျဂြာ ဒုက်ခသညျမြားကို ၂၀၂၂ မတျ ၆ ရကျနကေ့ တှရေ့စဉျ
မွနျမာနိုငျငံက စကျလှနေဲ့လာတဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျ တဈရာကြျောဟာ တနင်ျဂနှနေေ့ အစောပိုငျးမှာ အငျဒိုနီးရှား နိုငျငံ အာခြေးပွညျနယျက ပငျလယျကမျးခွကေို ရောကျလာခဲ့တယျလို့ အစိုးရမဟုတျတဲ့ အဖှဲ့တဈခုက ပွောတဲ့အ ကွောငျး Reuters သတငျးမှာ မနကေ့ဖျောပွထားပါတယျ။
ကလေးငယျ ၃၅ဦး အပါအဝငျ ဒုက်ခသညျ ၁၁၄ ဦးဟာ ပငျလယျထဲမှာ ဘယျလောကျ ကွာခဲ့သလဲဆိုတာ အငျဒိုနီး ရှား အာဏာပိုငျတှကေ အသအေခြာ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒုက်ခသညျအခြို့ကတော့ ကနျြးမာရေး အကူ အညီတှေ လိုအပျနတေယျလို့ အာခြေးပွညျနယျက စတေနာဝနျထမျး ကူညီသူ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
Labels: 2022, Boat People, mm, ရိုဟငျဂြာ, သတငျး, အငျဒိုနီးရှား
အစောပိုင်းမှာတော့ ဒုက္ခသည်စက်လှေကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပေမဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ ရာ က အခုနောက်ဆုံး အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ကမ်းကပ်ခွင့် ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာ, 2021, Boat People, mm, News, Viodeo, အင်ဒိုနီးရှား
ရိုဟင်ဂျာမူဆလင် (၁၂၀)ကို တင်ဆောင်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်စွန်း အာချေးဒေသ ကမ်းလွန်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ လှေတစင်းကို ဆိုက်ကပ်ခွင့်ပြုဖို့ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်တွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါတယ်။
အခုလို ဆုံးဖြတ်ရတာဟာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အများစုပါဝင်တဲ့ ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေ လွန်စွာ ဆိုးရွားနေတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား ဒုက္ခသည်ရေးရာ အရာရှိ Armed Wijaya က ပြောပါ တယ်။
“လူသားချင်း စာနာမှု အခြေအနေတွေအရ ၊ အခုလို ပင်လယ်ထဲ မျောနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံဖို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့” .. သူက ပြောသွားတာပါ။
Labels: 2021, Boat People, mm, News, အင်ဒိုနီးရှား, လှေစီးပြေး ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်
Labels: 2021, Bangladesh, Boat People, en, News, Recover, Rohingya